केही आफ्नै कथा, ब्यथा अनि भावनाहरु: July 2008
मगर समाजमा विशेष गरि नाचिने नाचहरु मध्ये कौडा, सोरठी, घाटु, कडुवा, पैसेरु, मारुनी, हुर्रा आदी आदी भएतापनि पुवली मगरहरुको गहनाको रुपमा हुर्रालाइ लिन सकिन्छ । यो एउटा सामुहिक नत्य हो । कार्तिक महिनाको काकआसीको भोलिपल्ट देखि पूणमा सम्म लगातार १५ दिन नाचिने गरिन्छ । यो नाच देउसी भैलो खेल्दा खेल्दै सुरु भएता पनि हाल पुवर्ली मगरहरु माझ छुट्टै संस्कतिको रुपमा स्थापित भैसकेको छ । यहा तिहारमा देउसी भैलोको अवसर पारेर हुर्रा नाच्ने गरिन्छ । यसलाइ स्थानिय भाषमा भैलो खेल्नु भनिन्छ । टोलभरि के महिला, के बुढापाका, के केटाकेटी सम्पूर्ण मिलेर खेलिने यो हुर्रानाचबाट उठेको रकमले सुगुर, रक्सि, आदी विभिन्न खाने कुरा किनेर पछि कुनै एक दिन निश्चित गरि भैलोभोज मनाउने गर्दछन। भैलो भोजमा उपस्थित हुन नसक्नेहरुको घरै गएर भाग पुर्‍याइ दिने प्रचलन छ । यो हुर्रा नाच तिहारको अवसरमा मात्र नखेली अन्नवाली भियाउने समय कुलपुजा, छेवर, पास्नी, तथा विवाह जस्ता शुभकार्यमा पनि ठूलो संख्यामा युवा युवती भेला भै नाच्ने गरिन्छ । तर यस्तो बेलामा चाही दान दक्षण दिदैंनन मात्र मनोरञ्जन माया प्रीतिका कुरा साटासाट गन गर्दछन।
Posted by मनु ठाडा मगर (MANU) at 1:30 AM3comments: Links to this post
आज मन मस्तिस्कैबाट अफिसको काम गर्ने जाँगर हराएर आएकोले व्लग तिरै आँखा दौडाए । व्लगमा के गर्ने त? सोचे कविताको पालो आए जस्तो छ ,तर कस्तो कविता हाल्ने त? सोच्दासोच्दै दैनिक पत्रिकाहरुमा प्रकाशित समाचारहरु सँग मिल्ने आफ्नै कविता सँग्रहको एउटा कविताको याद आयो, लौजा एउटा आफ्नै कविता सँग्रहको कविता हाली दिए समय सान्दर्भिक छ या छैन थाहा छैन अनि यो कविता भन्न मिल्छ वा मिल्दैन त्यो पनि थाहा छैन । त्यसैले यो छुट्‍याउने काम चै तपाइहरुलाइ नै जिम्मालाइ दिए
आज भोली मानिसहरु फेरी हास्न छाडेका छन्
किन हो कुन्नी कुराहरु मन मै राख्न थालेका छन्
हिमाल चढ्‍न चालिएका पाइलाहरु शिखरमा कहिल्यै नपुग्ने भएका छन्
आफैले हिड्‍न थालेका बाटाहरु आफैले विर्सन थालेका छन्
आजभोली खै किन हो कुन्नी सबै मानव जाति हास्न छाडेका छन्
एउटा लक्ष लिएर बाटो लागेकाहरु लक्षमा पुग्न छाडेका छन्
थालिएका काम पनि अधुरो अधरै छाड्‍न थालेका छन्
देश बनाउछु भनि लागेका नेताहरु देशै छाडी भाग्न थालेका छन्
धिकार दिलाउन लागेकाहरु आफै घर भत्काउन थालेका छन्
मानवताको अर्थ नबुभी रहरहरुको लहर बोकी दौडन थालेकाहरु
आफुले गर्न सक्नेकामहरु पनि विचैमा छाड्‍न थालेका छन्
आफ्नै स्वार्थ पुरा गर्ने मात्र ध्येय राखी अरुलाइ कन्याउन थालेका छन्
न्‍षड्‍यन्त्रको जालो बुनि सुन्दर सपनाको पालुवा भाच्न थालेका छन्
जन्मने वितिकै थालिएका कामहरु अनि आफ्नै कर्तव्य विर्सेर
जो पनि अरुलाइ भाजोहाल्न मात्र सिक्न थालेका छन्
एक पटक एकतान्त्रिय तानाशाहिको गन्ध फैलाउन खोजेका छन्
आफ्नै गाउँघर बनाउछु भनि लागेकाहरु आफ्नै पेट भर्न लागेका छन्
मान्छे माथि मान्छेको भिडमा आफै आफै हराउन थालेका छन्
Posted by मनु ठाडा मगर (MANU) at 2:58 AM6comments: Links to this post
विविध कारणले गर्दा ब्लग अपडेट गर्न पाइ रहेकी थिइन । आज धेरै दिन पछि अपडेट गर्न कम्प्युटरमा बसे । तर खासै ब्लगमा हाल्ने सामग्री त जुटाउनै सकिन अनि यसो सोच बनाए कहिले काही त पुराना तस्बिरलाइ पनि सदुपयोग गरौ । यसो पुरानो खिचेको केहि तस्बिरहरु वल्टाइ पल्टाइ गरी यहा राखीदिए
घुमघाम गर्न चाहनु हुने साथीहरुलाइ यो सुन्दर स्थलहरुले भरिपूर्ण धनकुटा पनि एउटा राम्रो गन्तव्य बन्न सक्छ । यहाँ धेरै नै राम्रा ठाउँहरु छन जिल्लामा रहेका केही घुम्नै पर्ने ठाउँहरु तपाइहरुको सामु पस्केको छु एक चोटी यतै जाउँ न त? म तपाइहरुलाइ एउटा सुन्दर ठाउँ लैजान्छु एक छिनसगँ यात्रा गरौ न है ?तपाइहरु जहाँ हुनुहुन्छ त्यहिबाट सिधै धनकुटा,हिले सम्मको रात्री बस उपलब्ध छ । हैन त्यसरी रात्रीवसमा जान सकिन्न भने पनि केहि छैन तपाइ धरान सम्मको (दिवा तथा रात्री) बसमा जान सक्नु हुन्छ । जादा धरान नै पनि एउटा राम्रो गन्तव्य बन्न सक्छ । या एउटा नेपालकै सुन्दर नगरी हो । जहाँ तपाइको १२ घण्टाको बसको यात्राले थकित मन पनि त्यसै फुरुङ्ग बनाइ दिन्छ । अब जाउ धरानबाट १६ कि.मी. उकालो.... यो धरानको उत्तर समुद्रसतहवाट १४२० मी. को उचाइमा पहाडको टुप्पोमा अवस्थित सानो सुन्दर ठाउँ जुन भेडेटार बजारको नामले परिचित छ । यसलाइ म पुर्वको नगरकोट भन्न रुचाउछु। चिसो ठाउँ,स्वच्छ वातावरण,नागबेली सडक तथा मनमोहक दृष्यहरु यहाँका प्रमुख आर्कषण हु न। यी एक चोटी नजर लगाउनुस त यहाँ । छैनत सुन्दर ?
यो धनकुटा जिल्लाको दक्षिणी प्रवेशर पनि हो । यहाँबाट धनकुटा सदरमुकाम ३६ कि.मी. दूरीमा रहेको छ । भेडेटारबाट ओरालो र उकाला करीब १० वटा जति नागबेली घुम्तीहरु काटेर धनकुटा पुगिन्छ ।
हजुर यी माथीका डाडाँहरु धनकुटा बजारको एक भलकहरु हुन् । अब यो धनकुटा नगरपालिका स्थीत धनकुटा बजार छोडेर हामी फेरी उकालै लागौ । धनकुटा बजारको बसपार्कबाट करिब १२ कि.मि. अगाडी लगभग भेडेटार जतिकै चिसो ठाउँमा पुग्न सकिन्छ जसको नाम हो हिले । यो समुद्रसतहबाट करीब १९५० मीटर उचाइमा अवस्थित छ । यस हिलेबजार धनकुटा नगरपालिका वडा नं. १ मा अवस्थीत परदछ । कोशी राजमार्गमा पने हिले बजारबाट अघि बढेर तेह्रथुम, संखुवासभा तफ गएको छ भने भोजपुर तथा तुम्लिङ्गटार तफ जाने सडक पनि यहाँबाटै छुट्टिएको छ । हिले एक सानो पहाडी बजार हो । हिले एउटा व्यापारीक केन्द्र पनि हो । यहाँको तोङ्गवा र सुकुटी निकै प्रसिद छ । यदि तपाइहरुले पनि यहाँ पुगेर यहाको सुकुटी अनि तोङ्गवाको स्वाद लिनु भएन भने तपाइले जीवनमै निकै महत्वपूर्ण कुरा मिस गर्नु हुनेछ । यहाँ पर्यटकहरुकालागि सुविधाजनक होटल, लजहरु उपलव्ध छन। वर्षभरी चिसो हावापानी रहने हुनाले हिलेमा पनि चिसो वातावरणमा रमाउन चाहने मानिसहरु वर्ष भरी नै आइरहन्छन त्यसैले त तपाइहरुलाइ पनि सगैँ लान लागीरा छु नी ।
अव वाया तफको तेह्रथुम जाने बाटो छोडेर दाया तफ मोडौ अनि करिब १२ कि.मि. अगाडी बढौ त अब................. एक पटक यो भित्तालाइ पनि नियाल्ने कि त ????
हजुर यो हो पाखि्रबास, यी भित्ताहरु सदैव तपाइहरुको स्वागतमा हासी रहेको हुनेछ । मैले आज लैजान खोजेको ठाउँ पनि यहि सम्म हो, यो घुम्न जानेहरुको लागी उपयुत्त गन्तव्य स्थल । यी रङ्गिन भित्ताहरु आफै पनि मनमोहक छ यो एउटा कृषी अध्ययन अनुसन्धान केन्द्र पनि हो । यहाँ भित्र तपाइहरुले विभिन्न प्रकारका बनस्पति तथा जनावरहरु पनि नियाल्न सक्नु हुन्छ भने यहा विभिन्न किसिमका बोट विरुवा निसुल्क वा ससुल्क प्राप्त गर्न सकिन्छ । नीकै वष देखि यो क्षेत्र एउटा रमाइलो पारिवारिक पिकनिक स्पटका रुपमा पनि विकसित हुदै आएको छ । यहाबाट अगाडी गयौ भने अरुण पुग्न नि सकिन्छ तर यात्रा यहि विसर्जन गरौ । कस्तो लाग्यो त यो पहाडी यात्रा?एक चोटी जानेकी त यहा सम्म ?
Posted by मनु ठाडा मगर (MANU) at 2:27 AM 8 comments: Links to this post